Indlwana engaphambili yamanzi + idokodo langasese e-Grand Lake - I-Airbnb
Indlwana engaphambili yamanzi + idokodo langasese e-Grand Lake
Indlu eyakhiwe ngamapulangwe esechibini e-Padley 's Point! Le ndlu eyakhiwe ngamapulangwe iyalungiswa ngokuphelele ngekhishi elinefenisha kodwa isenayo leyo ndlwana (igumbi elilodwa elikhulu). Indawo yekamelo lokulala inendlovukazi phezu kombhede omkhulu olala ngokunethezeka 4, futhi usofa endaweni yokuphumula ungusofa olalayo (usayizi we-queen). Indlu isendaweni engamamitha angu-5 ukusuka endaweni yokungena yangasese kanye nedokodo langasese.
Ukuzijabulisa ngaseceleni kwechibi sekusele kancane! Ukubhukuda, ukudoba, nokuhamba ngesikebhe kungajatshulelwa endaweni yakho yangasese yasemanzini!
Nakanjani uzokwazi ukungena kuyo yonke indlu kanye nerempu yokuqalisa, idokodo, negceke elizungeze indlu. Idokodo linendawo yokudonsa futhi ushiye isikebhe sakho kanye nebhodi lokutshuza, kodwa sicela uqaphele futhi utshuze engcupheni yakho.
Ukuzijabulisa ngaseceleni kwechibi kumane nje kuyizinyathelo ezingu- ukusuka emnyango wakho e-Grand Lake. Ukubhukuda, ukudoba, nokushushuluza eqhweni nge-jet kungajatshulelwa endaweni yakho yangasese yasemanzini! Njengebhonasi eyengeziwe, ungathola izindawo ezihlukahlukene zokuqasha ezemidlalo zamanzi eduzane.
Izindawo ezibukekayo ze-Monkey Island ne-Shangri-La ziqhayisa ngokuzijabulisa, izindawo zokudlela ezibheke ulwandle, i-bar ejabulisayo kanye nama-grill, nokunye okungamakhilomitha angu-3 ukusuka ekhaya lakho-kusuka-ekhaya.
Shaya izixhumanisi e-Shangri-La, i-Oklahoma 's number one golf course enokubukwa okuhle kwe-Grand Lake kuyo yonke i-. Ngemva kwalokho, dlela kwenye yezindawo zabo zokudlela zezinga eliphezulu ezinokubukwa okuhlaba umxhwele kwale ndawo engasemanzini.
Abathandi bemvelo kufanele bathathe uhambo losuku oluya e-Bernice Area e-Grand Lake State Park - eduzane ngemizuzu engu-12 ngemoto. Leli paki elihle liziqhayisa ngama-acres angu-88 ehlane elimangalisayo lase-Oklahoma elinebhishi lokubhukuda, imizila yokuqwala izintaba, ukuqasha izikebhe, nokubukwa kwezilwane zasendle!
Sihlezi sitholakala ngomyalezo nocingo uma kudingeka!